Sunday September 10, 2017 - 07:53:55 in Wararka by Super Admin
Xilli Dowladaha carbeed ee Khaliifka ay iska indha tirayaa Muuqaalada Argagaxa badan ee laga soo tabinayo meydadka Kumanaanka Muslimiinta Rohingya ee daadsan galbeedka dalka Barma, tobanaanka kun ee ku go'doonsan xaduudda Bangaladesh, iyo boqola
Xilli Dowladaha carbeed ee Khaliifka ay iska indha tirayaa Muuqaalada Argagaxa badan ee laga soo tabinayo meydadka Kumanaanka Muslimiinta Rohingya ee daadsan galbeedka dalka Barma, tobanaanka kun ee ku go'doonsan xaduudda Bangaladesh, iyo boqolaalka kun ee qaxootiga ku ah daafaha dunida, dhagahana ka fureysteen qeyla-dhaantooda, ayaa hadana dhanka kale si la yaableh waxay dowladahan u kala tartamayaan u gurmashada iyo taakuleynta gaalada ku barakacday, kuna gurya beelay daadadkii iyo duufaanadii ku dhuftay gobolada dalka Mareykanka.
Dowlada Qadar ayaa ku dhawaaqday in aduun lacageed oo gaaraya 30 Milyan oo dollarka ay ugu yabooheysay dadka ku nool gobolka Taxes si ay kaga soo kabtaan musiibooyinkii dhawaan ku dhuftay gobolka sida uu xaqiijiyey Safiirka Mareykanka u fadhiya dowladaas.
Taakuladan oo lagu tilmaamay tii ugu balaarneyd oo Mareykanka kaga timid dibadda tan iyo markii ay bilowdeen fatahaadaha ku dhuftay dalka Mareykanka ayaa la sheegay in ay Qadar kaga gol leedahay soo jiidashada Mareykanka iyo in ay iska dhigto saaxiib Caalami ah oo garab taagan Mareykanka iyo shucuubta reergalbeedka.
Mashcal Bin Xamid Al-Thani oo ah Safiirka Qadar u fadhiya Mareykanka ayaa sheegay in ay la shaqeyn doonaan gudoomiyaha gobolka Taxas iyo Saraakiisha dowladda Mareykanka, kana saacidi doonaan sidii dib u dajin iyo dib u dhis loogu sameyn lahaa dadka dhiban.
Wakaaladda Wararka AP waxay sheegtay in tabarucaada Qatar ay timid xilli Isla maalintaas Xukuumadda Imaaraatka Carabta ay iyadana yaboohday aduun lacageed oo gaaraya 10 milyan oo dollar taas oo ay ugu talagashay in lagu caawiyo dadka uu saameeyey musiibooynka ku dhuftay gobolada Mareykanka.
Greg Abbott, oo ah gudoomiyaha gobolka Texas ayaa sheegay in uu la fajacay sida dowladaha iyo ururada ku nool daafaha dunida ay ula tacaadufeen dadka gobolka Texas markii ay musiibooyinkan ku dhufteen, wuxuuna sheegay in dowlado badan oo dhawaaqiid ah ay ka heleen taageero xoogan.
Qaar badan oo ka mid ah muslimiinta ayaa la fajacay tartamadan iyo loolanada ay dowladaha carbeed u galeen raaligelinta shacabka iyo dowlada Mareykanka xilli ay iska indha tirayaan kumanaanka Muslimiinta Rohingya ee ku xaniban xuduudaha Bangaladesh, Codowga horor ahna uu dhabarka ka taagan yahay.
Xitaa hadeysan Islaamnimo ugu gurman, Waxaa hubaal ah in marka ay taagan tahay bani’aadamnimada in dhaqaalaha malaayiinta ah ee ay ku taakuleynayaan shucuubta Mareykanka ay ka mudan yihiin Kumanaanka Muslimiinta Rohingya ee ka liita, ka faqiirsan, kana taagdaran kuwa hadda la siiyey.
Balse Islaamnimo iyo dadnimo midna ma ahan hadafkooda ee ujeedka ugu weyn wuxuu yahay qancinta iyo raaligelinta Donald Trump iyo dadkiisa si ay u kasbadaan Caqliyadiisa gaaban ee luuqaddan oo kaliya fahmi karta.
Qarax Gaariga looga Gubay Booliska Kenya Oo Ka Dhacay Gobolka Mandheera.